သူမကိုဝေဖန်နေတဲ့သူတွေပါ အမြင်ပြောင်းသွားစေမယ့် အရမ်းမိုက်လွန်းတဲ့ ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့် – Online News Post
သူမကိုဝေဖန်နေတဲ့သူတွေပါ အမြင်ပြောင်းသွားစေမယ့် အရမ်းမိုက်လွန်းတဲ့ ပုံလေးတွေကို ချပြလိုက်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်
အနုပညာ နယ်ပယ် မှာ အောင် မြင်မှု တွေကို သိမ်းပိုက် ရရှိထားပြီး ညို့အား ပြင်းပြင်း နဲ့ ဆွဲဆောင် နိုင်တဲ့ ပြည်သူ့ အချစ်တော်မလေး မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် စံရတီမိုးမြင့် ကို မသိသူ မရှိလောက် ပါဘူးနော်…… ။ သူမကတော့ ဗီဒီယို ဇာတ်ကား တွေ များစွာ ရိုက်ကူးထားပြီး သရုပ် ဆောင် ကောင်းမွန် တဲ့ အပြင် ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ဟန်ပန် အမူအရာ လေးတွေနဲ့ ပရိသတ် တွေရဲ့ အချစ်ကို ဖမ်းစား ထားနိုင်တဲ့ မင်းသမီး ချောလေး ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမရဲ့ ပရိသတ် တွေ ကလည်း ချစ်စနိုး နဲ့ သဲ လို့လည်း ခေါ်ကြပါ သေးတယ် ။
သဲ က တော့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ပရိသတ်တွေ အတွက် အမြဲ မျှဝေပေး လေ့ရှိတဲ့ သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ အမြဲ ဆန်းသစ်တဲ့ ဖက်ရှင်လေးတွေဝတ်ဆင် ကာ လှနေတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုနေရတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ် အချိုးအစားကလည်း အပြစ် ပြောစရာ မရှိအောင်ကို ကျော့ရှင်းလှပနေသူ လေး ဖြစ်တာကြောင့် ပုရိသ ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။သဲဟာ စိတ်ထားလေး ဖြူစင်သလောက် တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုလည်း သားသမီး အရင်းသဖွယ် ချစ်ခင်တာလေး လည်းတွေ့ရပါတယ်နော်….။
လတ်တလော မှာတော့ သူမရဲ့ ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေနဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေကို ပရိသတ်တွေ အတွက် မျှဝေပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။သဲရဲ့ လူမူကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက်တွင် “ဒီကောင်မလေးရဲ့ အရာရာကို မင်းပဲပိုင်တာပါ”ဆိုတဲ့ အဆိုပါ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဖော်ပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ကဲ ချစ်ပရိသတ်ကြီးကလည်း စံရတီမိုးမြင့် ရဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ပုံရိပ်လေးတွေကို ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ရန် ပြန်လည်မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…….။သဲကိုချစ်တဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း တခုခုပြောသွားပေးဦး နော် …….
photo credit : Aung Zaw
အႏုပညာ နယ္ပယ္ မွာ ေအာင္ ျမင္မႈ ေတြကို သိမ္းပိုက္ ရရွိထားၿပီး ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း နဲ႔ ဆြဲေဆာင္ နိုင္တဲ့ ျပည္သူ႔ အခ်စ္ေတာ္မေလး ေမာ္ဒယ္လ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ စံရတီမိုးျမင့္ ကို မသိသူ မရွိေလာက္ ပါဘူးေနာ္…… ။ သူမကေတာ့ ဗီဒီယို ဇာတ္ကား ေတြ မ်ားစြာ ရိုက္ကူးထားၿပီး သ႐ုပ္ ေဆာင္ ေကာင္းမြန္ တဲ့ အျပင္ ခ်စ္စရာ ေကာင္းတဲ့ ဟန္ပန္ အမူအရာ ေလးေတြနဲ႔ ပရိသတ္ ေတြရဲ့ အခ်စ္ကို ဖမ္းစား ထားနိုင္တဲ့ မင္းသမီး ေခ်ာေလး ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမရဲ့ ပရိသတ္ ေတြ ကလည္း ခ်စ္စနိုး နဲ႔ သဲ လို႔လည္း ေခၚၾကပါ ေသးတယ္ ။
သဲ က ေတာ့ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြကို ပရိသတ္ေတြ အတြက္ အျမဲ မၽွေဝေပး ေလ့ရွိတဲ့ သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။သူမဟာ အျမဲ ဆန္းသစ္တဲ့ ဖက္ရွင္ေလးေတြဝတ္ဆင္ ကာ လွေနတာေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြက အခ်စ္ပိုေနရတာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ခႏၶာကိုယ္ အခ်ိဳးအစားကလည္း အျပစ္ ေျပာစရာ မရွိေအာင္ကို ေက်ာ့ရွင္းလွပေနသူ ေလး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပုရိသ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။သဲဟာ စိတ္ထားေလး ျဖဴစင္သေလာက္ တိရစၧာန္ေလးေတြကိုလည္း သားသမီး အရင္းသဖြယ္ ခ်စ္ခင္တာေလး လည္းေတြ႕ရပါတယ္ေနာ္….။
လတ္တေလာ မွာေတာ့ သူမရဲ့ ပင္ကိုယ္အလွတရားေတြနဲ႔ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလးေတြကို ပရိသတ္ေတြ အတြက္ မၽွေဝေပးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။သဲရဲ့ လူမူကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာ ထက္တြင္ “ဒီေကာင္မေလးရဲ့ အရာရာကို မင္းပဲပိုင္တာပါ”ဆိုတဲ့ အဆိုပါ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ကဲ ခ်စ္ပရိသတ္ႀကီးကလည္း စံရတီမိုးျမင့္ ရဲ့ ခပ္မိုက္မိုက္ပုံရိပ္ေလးေတြကို ၾကည့္ရႈအားေပးနိုင္ရန္ ျပန္လည္မၽွေဝ ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္…….။သဲကိုခ်စ္တဲ့ ပရိသတ္ေတြကလည္း တခုခုေျပာသြားေပးဦး ေနာ္ …….
Previous post တကိုယ်လုံး အကုန်ကိတ်တယ်ဆိုတာသိရအောင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေ
Next post သီချင်းနဲ့အပြိုင် တကိုယ်လုံးကို လှုပ်ယမ်းပြီးဆက်ဆီဒန့်လေး ဆွဲပြလိုက်တဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အလန်းဗီဒီယို